Nnukwu ụlọ OCEANFRONT nwere echiche dị ịtụnanya !!
HomeNnukwu Oceanlọ Nnukwu frontlọ Akụ Na wstụ Echiche !!
MAKA :LỌ EGO: Ala dịpụrụ adịpụ nke oké osimiri n'ime obodo El Poris dị jụụ, na ndịda Tenerife, Canary Islands, Spain!
Okwu a na-akpọ “Porís” n'asụsụ Canarian na-anọchite anya “obere ọdụ ụgbọ mmiri”. Ewezuga ọdụ ụgbọ mmiri obodo a mara mma nke nwere oke osimiri - nke nwere odo na nke ọzọ nwere aja ojii, ebe igwu mmiri na akụrụngwa obodo niile gụnyere ụlọ ahịa, akụ, ụlọ ahịa ọgwụ, ụlọ mmanya na ebe nri. Obodo ahụ nwere ezigbo njikọ na okporo ụzọ TF-1 yana ọdụ ụgbọ elu South, Santa Cruz na ebe ndị njem nleta Adeje - ha niile dị nkeji iri abụọ.
Islọ ahụ dị n'obodo ochie bụ El Porís n'ihu oke osimiri na ịnweta mmiri ahụ. Nke a bụ agbata ebe obibi dị jụụ nke nwere nnukwu asphalt ụzọ nke na-eduga gị na mpasa ụgbọ gị nkeonwe.
A kesara ụlọ ahụ n'ime ọkwa atọ:
Ala: Nnukwu mbara ala nwere oghere echiche panoramic oké osimiri, ebe mkpọchi ugba, ime ụlọ, ime ụlọ, ime ụlọ ịwụ ahụ, kichin nke nọọrọ onwe ya, oghere sara mbara ime ụlọ na ebe a na-ahụ ụzọ abụọ!
Floorlọ nke mbụ: Ebe obibi ọzọ, ime ụlọ abụọ, otu ime ụlọ ịsa ahụ, ebe a na-asa akwa ma nwee ike iru n’elu ụlọ ahụ. Ime ụlọ ya na ebe nna ukwu na-enwe windo panoramic nwere oke osimiri ịtụnanya !!
Floorlọ nke abụọ: Ulo elu nwere ogwe ala 360 and na ugwu ugwu na obere ala nke enwere ike iji ya mere ubi ma obu ogbe ubi kute nkpuru gi.
Islọ ahụ dị mma ma dịrị njikere ịkwaga! Naanị ihe onye nwe ya ọhụụ ga-eme bụ itinye ebe a na-esi nri ọhụrụ.
E nwere nnukwu sọks abụọ dị na El Poris - ha abụọ n'ime nkeji ole na ole na-aga ụlọ!
Biko kpọtụrụ anyị iji hazie ọbịbịa gị!
Atụmatụ ala & ịnye ọnụahịa
Ụlọ ala 3 1 140 € View
Ala mbụ 2 1 140 € View
Ndị bịara ọhụrụ:
Finca na Echiche Fantastic Na Icod!
View niile na-enye →
Adeje Agua Dulce Alcala Arguayo Aaron Buenavista del Norte Candelaria El Medano El Porís El Tanque Garachico Granadilla de Abona Guia de Isora Icod de Los Vinos Igueste La Caldera La Caleta de Interián La Laguna La Montañeta La Orotava Las Caletillas Las Portelas Los Cristianos Los Gigantes Los Realejos Los Silos Maska Nkwụ Mar Playa de la Arena San Juan osimiri Playa Paraiso Playa San Marcos Playa Sibora Puertito de Guimar Puerto de la Cruz Puerto de Santiago Punta de Hidalgo San Andres San Isidro San Juan de la Rambla Santa Ursula Santiago del Teide Tablado Taganana Tamaimo
© 2020 ATLAS Tenerife® Real Estate, Ikike niile echekwabara. Laghachi n’elu